ဖဲကြိုး Shredder: ဖဲကြိုခွဲထွက်, လက်ဆောင်ထုပ်များအတွက်ဖဲကြိုး Curler Tools များ
RSPAC ဖဲကြိုးဖျက်စီး Curler
မင်းရဲ့ဖဲကြိုးတွေနဲ့လေးတွေကိုလွင့်ပါ & ခုန်! လွယ်ကူသောလွယ်ကူသောတစ်ခုတည်းသော Curling နှင့် Shredding!
အဆိုပါဖဲကြိုး curling tool ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ဖဲကြိုးဖျက်စီး slitters,
သင်၏ထုပ်ခြင်းအတွက်ဖဲကြိုးအထူးအထူးပြုလုပ်ချက်များပြုလုပ်ပါ / RSPAC ™ဖဲကြိုး Shredder နှင့်အတူလက်ဆောင်များ!!!
RSPAC™ဖဲကြိုးဖျက်စီး tool ကဖြစ်ပါတယ် အများဆုံးပြည့်စုံခြင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသော စျေးကွက်အပေါ်ဆံပင်ကောက်ကောက်နှင့်ဖျက်စီးကိရိယာတန်ဆာပလာ.
အသေးစား Tool ကို, Big Fun
အဆိုပါစမတ်နေရာလေးကို tool ကို, သင်၏လှပသောဖဲကြိုးများကိုရိုးရှင်းစွာဆွဲခြင်းဖြင့်ပြိုကွဲအောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်. သင်၏ DIY ထုပ်ပိုးထုပ်ပိုးမှုအတွက်အလှဆင်ပစ္စည်းများပိုမိုထည့်ရန်နှင့်သင်၏လက်ဆောင်များကိုထူးခြားစေရန်.
အမျိုးမျိုးသောစတိုင်များ & အရောင်များ
တစ်ခုတည်းအတွက်ရရှိနိုင်, နှစ်ဖက်စလုံးက, သတ္တုအံသွားသို့မဟုတ်စုစုပေါင်းကြောင်းပလပ်စတစ်အံသွားနှင့်အတူ4သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်မတူညီသောစတိုင်များ, အနည်းဆုံးတော့4ဒီဇိုင်းတစ်ခုချင်းစီ၏ကွဲပြားခြားနားသောအရောင်များ.
2 အသစ်မော်ဒယ်များဖွံ့ဖြိုးဆဲနှင့်ပြုပြင်မွမ်းမံအောက်မှာနေဆဲဖြစ်သည်, မကြာမီရရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်. ဒါ့အပြင်, ကျနော်တို့ဖဲကြိုးဆက်စပ်ပစ္စည်းအသေးစား tools များဖွံ့ဖြိုးဆဲစောင့်ရှောက်မည်, ကြိုဆိုပါတယ် ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
ကျွန်ုပ်တို့၏အသုံးပြုသူများထံအပ်နှံထားပါသည် & ထုတ်ကုန်များ
ရိုးရိုးလေးပြောရမယ်, ကျနော်တို့အောင်အပေါ်ရှင်သန် RSPAC™ဖဲကြိုးဖျက်စီး, စျေးကွက်ထဲတွင်အပြည့်စုံဆုံးနှင့်ယုံကြည်ရသောလက်ဆောင်ထုပ်ခြင်းကိရိယာများ.
W ကဦး ထုပ်ဖဲကြိုးဖျက်စီးဖြစ်ပါတယ်?
ဖဲကြိုးဖျက်စီး, လည်းခေါ်ခံရ ဖဲကြိုး curler,ဖဲကြိုးရှုး,ဖဲကြိုး mini ကိုအလျားလိုက်အပေါက် tool ကို,ဖဲကြိုး mini ကိုအလျားလိုက်အပေါက်စက်, သို့မဟုတ် ဖဲကြိုး splitter.
စျေးကွက်တွင်အလှဆင်ဖဲကြိုးဖျက်စက်အမျိုးမျိုးရှိသည်，ကဲ့သို့: သတ္တုသွားနှင့်အတူဖဲကြိုးဖျက်စီး,ဖဲကြိုးဖျက်ဆီးနဲ့ curler,ပလတ်စတစ်အံသွားနှင့်အတူဖဲကြိုး splitter,နှစ်ဆနှစ်ဖက်ဖဲကြိုးဖဲကြိုး နှင့်ကိရိယာများကိုကောက်,ဖဲကြိုးအပေါက်,ဖဲကြိုးဖျက်ဆီးစက္ကူရှုး,ဖဲကြိုးဖျက်ဆီး curler tool ကို,စသည်တို့ကို.
ထိုအပေါက်နှင့်အတူ tool ကို၏အောက်ပိုင်းမေးရိုးနွေ ဦး ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်ကိုလက်ခံရန်.
တစ်ဦးကလက်ဖြတ်ဖို့လိုအပ်သောငွီးငှေ့ဖှယျအလုပ်နှင့်အချိန်ပပျောက်ခြင်းနှင့်ပိုမိုအလှဆင်လုပ်ကတ်ကြေးနဲ့ဖဲကြိုးခွေမှ tool ကို operated,အထက်နှင့်အောက်ပိုင်းမေးရိုးဆန့်ကျင်ဖိဖြင့်, ထို့နောက်ရုံ tool ကိုမှတဆင့်ဖဲကြိုးဆွဲ.
ဒါဟာငယျဆုံးသော width ကို comprising ၏ဖဲကြိုး strips တွေတစ်ဗဟုသို့ပထမဦးဆုံး width ကို၏ Poly ဖဲကြိုးပစ္စည်း slitting များအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ,ထို့နောက်တစ်ဦးအလှဆင် finish ကိုများအတွက်ခွေ. ထိုကဲ့သို့သောဆုကြေးဇူးကိုထုပ် packages များနှင့် stuffing ပေါ်တွင်အသုံးပြုအဖြစ်, ဖဲကြိုးတစ်မျှင်က၎င်း၏အသုံးပြုမှုအားဖြင့်ပိုပြီးအလှဆင်လုပ်နိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာ.
1080p HD ဗီဒီယို Full HD 1080p | Honstar လက်ဆောင်ထုပ်ပိုးကုမ္ပဏီလီမိတက်.
ထူးခြားသောလက်ဆောင်များဖန်တီးရန်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောကိရိယာများကကူညီသည် & အံ့အားသင့်စရာ
အံ့သြစရာ “သွား” တ ဦး တည်းလွယ်ကူသောဆွဲဘို့ဖျက်စီး၏
ခရစ္စမတ်လက်ဆောင်၏ထိပ်တွင်ထူးခြားသော curling နှင့် bounce ဖဲကြိုးအကျိုးသက်ရောက်မှုဖြင့်အလှဆင်ရန်
ကျော်လွန် 70,000 အသုံးပြုသူများ, တချို့ပြောစရာရှိတာကိုကြည့်ရအောင်?
ကောင်းပါတယ်!!!!!!!!!!!!!!ဝေးနေဖြင့်ငါအစဉ်အမြဲငါအသုံးပြုတဲ့အကောင်းဆုံးဖျက်စီး. အထူးအကြံပြုလိုပါတယ်. သင်ဟာသင်၏ထုပ်ပိုးမှုများကိုလုပ်တော့သောအခါသင်ဖျက်စီးခြင်းကိုကြောက်လန့်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ.
ကောင်းပါတယ်. ရုံအခြားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၏အကြံပေးချက်ကိုလိုက်နာနှင့် …ကောင်းပါတယ်. ရုံအခြားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၏အကြံပေးချက်ကိုလိုက်နှင့်ထား “သွား” ဖဲကြိုး၏ထိပ်ပေါ်မှာဖျက်စီး၏.
RSPAC ဖဲကြိုးဖျက်စက်သည်လူကြိုက်အများဆုံးလက်ဆောင်ထုပ်ခြင်းဆံပင်ကောက်နှင့်ဖျက်စီးပစ္စည်းများဖြစ်သည်! ငါတို့ကစက်ရုံပါ!!
အံ့သြဖွယ်အင်္ဂါရပ်များနှင့်အတူလာ, ဆွဲဘို့ပရီမီယံ "အံသွား", တောက်ပသောအရောင်များ, အမျိုးမျိုးသောစတိုင်များ options များ & အများကြီးပို!